Do you know about Facebook? | From Myanmar Web Store facebook ads
Do you know about facebook??
Facebook ( social networking website ) ကို Thefacebook အမည်ဖြင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၄ရက် ၂၀၀၄ တွင် အသက်(၂၀)အရွယ် ဟားပတ် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား Mark Zuckerberg မှစတင်အကောင်ထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ကော်လိပ် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အတွက်သာ ရည်ရွယ်၍ website ကိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လအနည်းအငယ်အတွင်းမှာတင် Thefacebook သည် nationwide college networking website ဖြစ်လာသည်။
ထို့နောက် August 2005 တွင် Facebook ဟူ၍နာမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် facebookကို english speaking countries များ၌သာ အသုံးပြုလို့ရသည်။ Facebook ကို C++, PHP (as HHVM) and D language ကို အသုံးပြု၍ ရေးသားထားသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် facebook users သုံးစွဲသူပေါင်း 1.35billion နှင့် Daily active users နေ့စဉ် အစဉ်အမြဲသုံးစွဲသူပေါင်း 890 million ရှိသည်။ ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာလ အထိ Facebook, lnc. တွင် ဝန်ထမ်းပေါင်း 9,199 ဦးရေ ရှိသည်။ Facebook ၏ တန်ဖိုးသည် ယခု february 2015 တွင် $212 Billion တန်ဖိုးရှိသည်။ facebook ကို ဘာသာစကားပေါင်း 70 ဖြင့် ယခုအခါ အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ ယခု facebook ရုံးချုပ်သည် Menlo Park, California,US တွင် တည်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့အချမ်းသားဆုံး စာရင်းဝင် Mark Zuckerberg ကိုယ်တိုင် CEO အဖြစ် အုပ်ချုပ်လျက်ရှိသည်။
Facebook သုံးစွဲသူ မြန်မာပြည်သူများ ဗဟုသုတ ရရှိစေရန် ကျွန်တော်/ကျွန်မတို့ Myanmar Web Store မှ en.m.wikipedia.org/wiki/facebook Link ကို အခြေခံ၍ ရေးသားထားသည်။
facebook design အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာပုံ နှင့် ယခုလက်ရှိ ရုံးချုပ်အဆောက်အအုံပုံကို photo attachment တွင် လေ့လာနိုင်သည်။
Myanmar Web Store မှ မိတ်ဆွေတို့ လုပ်ငန်းအတွက်
– Branding Website
– Web Hosting နှင့် Domain name
ပြုလုပ်ခြင်းများနှင့်ပက်သက်သော ကိစ္စအဝဝအား အကောင်းမွန်ဆုံး ၀န်ဆောင်မှု ၊ အချိုသာဆုံးနှုန်းထားများဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ တာဝန်ယူပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
Like and follow Us on Facebook- Myanmar Web Store Facebook Page
Related Articles with Facebook- Image to GIF ပြောင်းနည်း
What is Social Media?ဆိုရှယ်မီဒီယာ Media ဆိုတာဘာလဲ?" >
What is Social Media?ဆိုရှယ်မီဒီယာ Media ဆိုတာဘာလဲ?